China Aluminium Izahlulo mveliso kunye nabenzi | Khokela
Ukuba unamalungu e-aluminium kufuneka yenziwe ngomatshini, singomnye wemithombo efanelekileyo kwaye efikelelekayo, kwaye sinokuwenza kakuhle umsebenzi.
Zeziphi izibonelelo zealuminium, kwaye zeziphi ialuminium alloy ezithandwayo?
Ngenxa yokuba iAluminiyam ineempawu ezahlukeneyo ezintle, ke inoluhlu olubanzi kakhulu lokusetyenziswa.
Ubuninzi beAluminiyam bincinci kakhulu, kuphela yi-2.7 g / cm, nangona ithambile, kodwa inokwenziwa nge-aluminium eyahlukeneyo, enje nge-aluminium enzima, i-aluminium enzima kakhulu, i-rust aluminium, i-aluminium yentsimbi njalo njalo. Ezi aluminiyamu zisetyenziswa ngokubanzi kwiinqwelomoya, imoto, uloliwe, ukwakha iinqanawa kunye namanye amashishini okuvelisa. Ukongeza, irokethi yendalo iphela, isiphekepheke, iisathelayithi zisebenzisa ialuminiyam kunye nealuminium alloy.
I-2.Aluminium ngumqhubi olungileyo wobushushu, i-thermal conductivity yayo inezihlandlo ezi-3 ezinkulu kunentsimbi, inokusetyenziselwa ukwenza iindidi zokufudumeza ubushushu, iisinki zokufudumeza kunye nezinto zokupheka.
3.Aluminium ine-ductility engcono, kwi-100 ℃ ~ 150 ℃ inokwenziwa ngefoyile ye-aluminium ethe tyaba kune-0.01mm. Ezi foyile zealuminium zisetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni iisigarethi, iilekese, njl njl.
Umphezulu wealuminium unefilimu ekhuselekileyo ye-oxide okhuselekileyo, engenakho ukubola. Ke ihlala isetyenziselwa ukwenza izixhobo zombane, izixhobo zonyango, iifriji, ukucoca ioyile, imibhobho yeoyile kunye negesi.
Ezinye zezona alloys zaziwayo zealuminium ziyalandela:
IAluminiyam 2024, 5052, 6061, 6063, 7075
Sesiphi isicelo esenza iAluminiyam isetyenziselwa yona?
Izinto zealuminium zisetyenziselwa izixhobo ezizenzekelayo, iinxalenye zeenqwelomoya, izixhobo zonyango, iinxalenye zombane, izinto zefanitshala kunye nezinye izinto
Iinxalenye zeenqwelo moya
Egqithileyo Izahlulo zentsimbi yeStaniless
Okulandelayo: CNC Machining